China Hedge Trimmer vagadziri uye vanotengesa | Dongheng Machinery
Zvimiro zveedu ruzhowa rucheka
Yakatengwa epamusoro-soro mashizha uye aricheke munwe anovimbisa yakashambidzika uye yakajeka kutemwa
MUENZANISO WEMAHARA BASA
Kunyanya kugadzikana kubva kune nyowani inorema-basa bhaa.
Mazino ese ekucheka anotsiviwa ega.
MBIRI TYPE Wedzera-PAKUWEDZERA
1m yakajairwa yekuwedzera bhaa inowanikwa kutora iyo yakazara yekucheka upamhi kusvika 2.5m kana kuwedzera1m kucheka kukwirira.
KINGER hedge trimmer inogona kuiswa pane yekuchera, skid steer, backhoe loader nezvimwe.
KINGER Hedge Trimmer chisungo chakanakisa kune chero zvigadzirwa zvekuchera kubva pa1,5 kusvika ku8 tonnes.Ichi chinongedzo chinoratidza kugona kwekucheka kwakasangana pamwe nekusvika kwenguva refu kwechivigiro.Meno akacheka anotemwa akaunzwa kunze kwenyika anogona kutema nyore nyore kuburikidza nematavi anosvika 50mm dhayamita asi zvakare achatema huswa uye bhurasho.
Uye zvakare, yakasarudzika yekuwedzera bhaa inotora iyo yakazara yekucheka kureba kune inoshamisa 2.5m.
Hedge trimmer inokodzera kuchekerera mashizha, paki, gadheni, nzira dzemumigwagwa uye kumwe kugadziridza kwehunyanzvi mune yakanakisa nzira inoshanda.
Kunyoresa Kubhadhara & Kuendesa
Pamusoro penyaya ndeye ruzhowa rwedu rwekucheka maratidziro ereferensi yako.Inokodzera 1.5-8 toni yekuchera / skid steer / backhoe loader nezvimwe.
Pashure: Plate compactor
Zvadaro: Sheari yemuti